वैधानिक बाटो रोज्न डा. केसीलाई राज्मन्त्री अर्यालको आग्रह | Himalaya Post
वैधानिक बाटो रोज्न डा. केसीलाई राज्मन्त्री अर्यालको आग्रह
Posted by Himalaya Post | २७ असार २०७५, बुधबार १८:२३ |
काठमाडौँ – स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले डा. गोविन्द केसीलाई आफ्ना माग सम्बोधनका लागि वैधानिक बाटो रोज्न आग्रह गरेकी छन् ।
आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री अर्यालले डा. केसीले आफ्ना माग संसद्मा प्रस्तुत गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमार्फत रोज्ने भन्दै विधेयकमा सांसदमार्फत संशोधन हालेर आफ्ना माग पुरा गर्न आग्रह गरिन् ।
विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा गएर अनसन बसेर डा केसीको माग पुरा नहुने उनको भनाइ थियो । डा केसीले जस्तै आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा प्रत्येक नेपालीले अनसन बस्न थाल्यो भने के हुन्छ भने प्रश्न गदै उनले आफूलाई लागेको बेला अनसन बस्न नपाइने बताइन्। डा केसीको जायज माग सम्बोधन हुने राज्यमन्त्री अर्यालले बताइन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनबाट चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव लिएको भन्दै शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
“माथेमा प्रतिवेदन सुझाव दिन मात्र बनाएको हो । प्रतिवेदनमा १० वर्षसम्म काठमाडौँमा कलेज नखोल्ने भनेर सुझाव मात्र दिइएको हो,” उनले भने– “माथेमाले दिएको सुझाव मान्नुपर्दछ भन्ने छैन, सुझाव हो, राम्रो लागे मान्ने हो, नभए मान्ने होइन ।”
भट्टराईले कसैले केहीका लागि अनसन बस्दैमा माग पुरा गर्नुपर्ने भन्ने नभएको बताए । डा केसीले भनेका सबै माग पुरा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा केही उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले भने, “केसीले भनेका मात्र कलेजलाई सम्बन्धन दिने, अरुलाई नदिने भनेर कहाँ लेखेको छ ।”
नेता भट्टराईले डा केसी हरेक पटक अनशन मेडिकल शिक्षाको भर्ना खुल्ने समयमा बस्ने गरेको भन्दै उनको अनशनको उद्देश्य नै शंकास्पद रहेको धारणा राखे । अहिलेसम्म सम्बन्धन दिएका कलेजलाई संसदीय छानविन समिति गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“मेडिकल कलेजमा पढ्दा पास हुने, अनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा परीक्षा दिँदा फेल हुने,” उनले भने– “त्यसैले ती सम्बन्धन दिएका कलेजमाथि छानविन हुनुपर्छ ।” मेडिकल कलेज कसैलाई सिफारिस देउ, कसैलाई नदेउ भन्ने अधिकार डा केसीको नभएको नेता भट्टराईले बताए ।
नेपाली काँंग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले डा केसीका कतिपय माग जायज भएकाले छलफल गरेर टुङ्याउनुपर्ने बताए। उनले केसीका मुद्दालाई देखाएर काँग्रेसलाई राजनीति गर्ने रहर नभएको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा ढुण्डीराज पौडेलले डा केसीका माग सरकारले वार्ताबाट टुङ्याउनुपर्ने बताए ।
Previousअब काठमाडौँ उपत्यकामा दिउँसो टिपर चलाउन नपाइने !
Nextमापदण्ड लागु गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन
प्रदेश १ मा शुक्रबार हुन्छ धेरै अपराधका घटना
१२ श्रावण २०७५, शनिबार १२:०७
मेरो कार्यक्षेत्र र अधिकार ‘हाइज्याक’ भयोः गोपाल पराजुली
१ चैत्र २०७४, बिहीबार ११:३८
महोत्तरीका म्यादी प्रहरी पैसा असुल्दै
१८ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०५:५०
पुरानो बसपार्कमा बन्ने १२ तल्ले भ्यू टावरको बोलपत्र रद्द गर्दै कामनपा
२८ असार २०७४, बुधबार ०५:४६